KATRO & CO: Modely ny toeram-pivarotan’i Selesy mofo akondro | déliremadagascar
Tsy iadian-kevitra intsony ny hatsaran’ny kalitaon’ny mofo akondro amidin’i Selesy eny Ambohijatovo Avaratra. Na dia efa miharatsy aza ny toeram-pivarotany dia hifanotofan’ny mpanjifa hatrany ny tsenany. Nanapa-kevitra ny « Katro and Co » fa hanavao ny toeram-pivarotan’i Selesy. Vita soamantsara izany ary nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy androany Alakamisy 01 aogositra 2019. “Amin’ny maha mpiantsehatra manampy ny maha olona ny Katro and Co dia manolo-tanana maimaim-poana ireo mpivarotra madinika izahay ary tsy mangataka tamberim-bidy. Fanirianay ny hanampy mpivarotra hafa eto Antananarivo ankoatra an’i Selesy. Mason-tsivana voalohany hisafidianana ireo mpivarotra ny fandehanan’ny tsena na dia ratsy aza ny toeram-pivarotana”, hoy Razafindrasatrana Haja Fahaleovantena. Efa an-dalam-pikarakarana ny antontan-taratasin’i Selesy ho lasa toeram-pivarotana ara-dalàna ary ho fitaratry ny mpivarotra hafa ihany koa ity mpikatroka amin’ny lafiny ara-tsosialy ity.
Vola voaangona avy amin’ireo Malagasy mila ravinahitra any ivelany no nahafahana nanamboatra, nandoko ny toeram-pivarotan’i Selesy sy nividianana fitaovam-panendasana vaovao. Mitentina 600 euros ny totalin’ny fandaniana. Ny valin-tenin’ireo mpikambana tao amin’ny groupe facebook Katro Community no nosafidianana ity mpivarotra mofo akondro ity. Fanontaniana napetraka tamin’izany ny hoe: “Iza no mpivarotra tsara mofo akondro indrindra”. Mofo akondron’i Selesy no voaresaka be indrindra tao. Nambaran’i Selesy fa avy any Arivomamo izy ary niasa an-trano no nahatongavany teto Antananarivo. Nanomboka nivarotra mofo akondro izy ny taona 1993. 4700 Ariary no vola nampiasainy voalohany ary tafakatra 70.000 Ariary izany ankehitriny.
One comment on “KATRO & CO: Modely ny toeram-pivarotan’i Selesy mofo akondro”
Pingback: KATRO & CO: Modely ny toeram-pivarotan’i Selesy mofo akondro - ewa.mg